Dorgommii Daayimand Liigii: Atileet Siifan Haasan maayilii tokkoon riikardii addunyaa cabsite - Kichuu
[ July 2, 2020 ] Haile Selassie: Statue of former Ethiopian leader destroyed in London park	Africa
[ July 2, 2020 ] ODUU Hatattama Hacaluu Motumsan Abiy ajesu kuno raga qabatama fi wal dhabde isani itii dhiyadha	Videos
[ July 2, 2020 ] Turmoil at Funeral of Singer Shows Ethiopia’s ‘Combustible’ Politics	World
HomeSportsDorgommii Daayimand Liigii: Atileet Siifan Haasan maayilii tokkoon riikardii addunyaa cabsite
(bbcafaanoromoo)—-Atileet Siifan Haasan fiigicha fageenya maayilii tokkoon riikardii addunyaa waggoota 23’f ture cabsite.
Atileetin dhalootaan Itoophiyaa garuu biyya Neezarlaandiif fiigaa jirtu Siifan, dorgommii daayimand liigii Monaakootti dorgomame daqiiqaa afuriifi sakandii 12:33’n xumurte.
Kunis riikardii atileetii Raashiyaa Sivetilaanaa Maasterkovaadhaan bara 1996’tti daqiiqaa afuriifi sakandii 12:56 galmaa’e kan cabsite.
Fiigicha fageenya 5,000 shaampiyoonaa Awurooppaa kan taate atileet Siifan Haasan injifannoo isheen akka hedduu gammadde himti.
Dorgommiin kaleessa (Jimaata) galgalaa osoo hin dorgomamin guyyaa tokko dura ‘sakandii sadii ykn afur’ fooyyessuuf yaada qabdi turte.
Ta’us, 800m saffisa hin qabu ture kan jettu Siifan, dorgommiin hanguma xumuramaa deemu riikardii cabsuf akka jettullee hin hubanne ture.
Atileetii Itoophiyaa Gudaf Tsaggaay suuta of biraa dhiistee saffisa dabaluun erga injifatte turte booda ture riikardii cabsuu ishii kan hubatte. Waan hin eegnees ture.
”Yeroon sarara fiigichaa xumuru qaxxaamure, baay’een gammade. ”
Fiigicha fageenya 1,500m shaampiyoonaa Awurooppaa kan taata atileetin Biriteen Laawuraa Muyir 2ffaa yeroo baatu atileetin Kanaadaa 3ffaa baate.
Atileet Siifan duuba kan kaataa turte atileetin Itoophiyaa Gudaf Tsaggaay 4ffaa kan baate.
Yaada 5,000m cabsuu
Akitti 400m xumuraa itti fiige bareeda ture kan jettu Sifan ”fiigicha 5,000m irratti ofitti amanamummaakoo naaf dabala,” jetteetti.
Yaada ishee Walda Federeeshinoota Atileetiksii Idil – addunyaa (IAAF)’f kan kennite Siifan, jajjabina daawwattoonni isheef kennaniin guddaa gammadde.
Dorgommiin itti aanu isheen fiigdu 5,000 dha. ”Riikardiin addunyaa biraa cabsuu barbaadu 5,000m dha. Eessatti akkan dorgomu garuu hin barre,” jetteetti.
Atileet Ganzabee Dibaabaan waggaa afur dura 1,500m’n riikardii addunyaa jorroo fiigichaa Sifan galmeessite irratti injifatatte.
Atileet Yoomiif Qajeelchaan baranuma baatii Bitootessaatti fiigicha mana keessaa maayilii tokkon Boostanitti riikardii addunyaa waggoota 22 ture cabsun isaa ni yaadatama.
🚨WORLD RECORD ALERT🚨
Sifan Hassan breaks 23-year-old world record in mile
1. Sifan Hassan 🇳🇱 4:12.33 *WR*
2. Laura Weightman 🇬🇧 4:17.60 PR
3. Gabriela DeBues-Stafford13 🇨🇦 4:17.87 PR
4. Tsegay 🇪🇹 4:18.31
5. Arafi 🇲🇦 4:18.42 NR
6. Embaye 🇪🇹 4:18.58 PR
7. Nanyondo 🇺🇬 4:18.65 NR
8. Mageean 🇮🇪 4:19.03 PR
9. Rachel Schneider 🇺🇸 4:20.91 PR